ရခိုင်အရေး ဖြစ်ပွါးသွားခြင်းကို ပြန်သုံးသပ်ခြင်း « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Uncategorized » ရခိုင်အရေး ဖြစ်ပွါးသွားခြင်းကို ပြန်သုံးသပ်ခြင်း
ရခိုင်အရေး ဖြစ်ပွါးသွားခြင်းကို ပြန်သုံးသပ်ခြင်း
by Ze Ro on Wednesday, June 6, 2012 at 2:13pm ·
ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့မှာ ထွက်သွားတဲ့ လူတချို့ ချက်ချင်း ပြန်လာပြီး မိန်းမတွေနဲ့ ကလေးတွေကို အ်ိမ်ပေါ်ကို တက်ခိုင်းပါတယ် … လမ်းမှာ မနေနဲ့ အိမ်ပေါ်ကိုတက် တံခါးကို လုံအောင်ပိတ်ထား ဆိုတဲ့ မှာသံတွေနဲ့ အတူ "ဟိုမှာ ရခိုင်နဲ့ ကုလားဖြစ်နေကြပြီ … ဘာသံပဲကြားကြား ကိုယ့်အ်ိမ်ထဲက မထွက်နဲ့တဲ့" … ကျွန်မအမေဆိုရင် သနားဖို့ကောင်းလိုက်တာ … ကျွန်မက အဘွားအ်ိမ်မှာမို့လို့တဲ့ စိုးရိမ်လို့ ထိုင်ငိုနေခဲ့တာ … ဖြစ်တာကလည်း အဘွားအ်ိမ်နဲ့ဆို လမ်းတွေ သိပ်မဝေးဘူးကိုး … တစ်ညလုံး မအိပ်ကြပဲ လမ်းက အသံတွေကိုပဲ နားစိုက်နေခဲ့ကြတာ … အဲဒီအချိန်တွေတည်းက ဥပဒေနဲ့ ဝင်ထိန်းလိုက်ရင် သိပ်ဆိုးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး … မနက်မိုးလင်းလင်းချင်း အိမ်ကို တန်းပြေးရတယ် … အဲဒီအချိန်မှာမှ သိလိုက်တာက ကုန်စည်ပြပွဲ နောက်ဆုံးညဆိုတော့ ၁၂ နာရီလောက်အထိ လူတွေ မစဲဘူးတဲ့ … ကောင်လေး နှစ်ယောက် ၊ ကောင်မလေး နှစ်ယောက် နဲ့ ကိုရင်လေးတစ်ပါး ညဖက် ၁၁ နာရီလောက်မှာ ပွဲကြည့်ရင်း တူတူပြန်ကြတာ ကုလားရွာက ဖြတ်ပြန်ရတော့ ကုလားတွေက ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကို သားပြော၊ မယားပြော လှမ်းပြောလို့တဲ့ … ကုလားရွာက ဖြတ်ပြန်ရတယ် ဆိုလို့ ပြောဦးမယ် … စစ်တွေမှာ ကုလားရွာ တော်တော်များများက အဓိက လမ်းကြီးတွေပေါ်မှာ ရှိတယ် .. နည်းတဲ့ ရွာကြီးတွေ မဟုတ်ဘူး … ပြီးရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံရှေ့တည့်တည့် Main လမ်းမဖြစ်တဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာလည်း ဗလီအကြီးကြီး နည်းတဲ့ဟာကြီးမဟုတ်ဘူး … အဲလို ကောင်မလေးတွေကို ပြောတော့ ကောင်မလေးတွေက ပြန်ဆဲလို့တဲ့ ဟိုက ပိုရိုင်းလာတော့ ကောင်လေးတွေကပါ ဝင်ပြောတော့ ကုလားရပ်ကွက်မှာ အဲဒီလူခြေပြတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ သူတို့တွေက ဆွဲလားရမ်းလား လုပ်တာနဲ့ ကောင်လေးနှစ်ယောက်၊ ကိုရင်လေး နဲ့ ဆွဲနေကြချိန် ကောင်မလေးတွေက ထွက်ပြေးသွားကြလို့ လွတ်သွားပါတယ် … သူတို့ကလည်း ကောင်မလေးတွေကို အာရုံမစိုက်တာလည်း ပါပါလိမ့်မယ် … ကောင်လေးနှစ်ယောက်က နယ်က ကျောင်းလာတက်တာပါ … ရွှေစေတီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေပြီးတော့ ကျောင်းတက်နေကြတာပါ … ဖြစ်ချင်တော့ စည်းကမ်းအရမ်းကြီးတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီး ခရီးလွန်နေချိန် ဖြစ်နေလို့ ခုလို ညဖက်ကို ခိုးထွက်လို့ ရကြတာပါ … အဲလို ထိုးကြိတ်ရင်းနဲ့ သူတို့ရွာထဲကို ဆွဲသွင်းရာက ကောင်လေးတစ်ယောက် လွတ်သွားပါတယ် … ကောင်လေးကလည်း ပွဲဖက်ကိုသာ ပြန်ပြေးရင် ပိုကောင်းသွားမှာပါ … လူတွေ အများကြီး လိုက်လာနိုင်ကြမှာ … ဒါပေမယ့် ကောင်လေးလည်း ကိုယ်လွတ်ရာပြေးရင်း ရွှေစေတီကျောင်းကို ရောက်သွားပါတယ် …
ကျွန်မတို့ရဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက တကယ်ကို ရိုးလွန်းလို့ ဒေါသကိုထုတ်ပြ လုပ်ပစ်လိုက်ကြတာ … ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြေးလာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ရပ်သွားမှာကိုလည်း သူတို့တွေ မသိလောက်အောင်ကို ရိုးကြ နုံကြ အကြတာ … သူတို့ အမျိုးသားရေးကို ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ အရိုးခံစိတ်တစ်ခုပဲ ရှိတယ် … အလိမ္မာ မရှိကြဘူး … ပရိယာယ်မရှိကြဘူး … ကျွန်မသာဆိုရင်တော့ အဲသလိုမလုပ်ဘူး … ကိုယ်လုပ်စရာမလိုဘဲ သူ့စားရိတ်နဲ့သူသွားအောင်ပဲ လုပ်မယ် … ဒါပေမယ့် ပရိယာယ်မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ အစ်ကိုတွေက ကျွန်မတို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ သူတို့တွေ ရှိကြောင်းကို ပြလိုက်သလိုပဲ … " ကျွန်မတို့ သွားနေကြတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်စေတဲ့ အတွက်ရော … လူ့အသက်ကို သတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ရော မုန်းတယ် … ပြီးရင် သူတို့တွေ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်မိသွားတာမို့လို့ သနားတယ် … နောက်ဆုံး အကာအကွယ်မရှိတဲ့ကျွန်မတို့တွေအတွက် သူတို့တွှေကာကွယ်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ချစ်မိတယ် ယူကြုံးမရဖြစ်မိတယ် … "
အကောင်း အဆိုး ၊ အကြောင်း အကျိုး ဆိုတာ လူမျိုးတိုင်း နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်စွာဖြင့်
Ye Myat Thu, Zaw Myo Lwin, Jack Yu and 192 others like this.
Kyaw Win ကောင်းလွန်းအားကြီးပါရေ… 10 hours ago · 6
Win Win Zaw I really appreciate your effort for this post in which all are the same what i would like to say, totally agree and i am crying while reading this post because i have remembered all situations happening at that time. Thank you very much Thin Cho! Thank you! 10 hours ago · 16
Ze Ro ရတနာလည်း ရေးယင်းနဲ့ မျက်ရည်ကျမိပါတယ် မမ … 10 hours ago · 14
Kyaw Win အေ ပိုစ်ကို တိုင်းရင်းသားတိ မျာများသိအောင် ရှယ်ပီးကေ ပိုကောင်းပါဖို့ သူရို့စော် ရခိုင်သားတိ ရိုင်းရေလို့ စိတ်မှာ ထင်နီရေ…. ရခိုင်သားတိ မရိုင်းပါ… မဟုတ်မခံ ရေ လူမျိုးပါ ဆိုစော်ကို သိအောင် ပြောပြရပါဖုိ့ 10 hours ago · 4
Nyi Chay ဒါပေမယ့် အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခုက ရခိုင်ဒေသကို ဥပဒေ အမှောင်ချထားလို့ မရတော့တာဘူးဆိုတာပါပဲ .. 10 hours ago · 10
Nyi Chay ‎2001 စစ်တွေ ကုလားရခိုင် အရေးအခင်းတုန်းက…
ညမထွက်ရ ပစ်မိန့် စထုတ်တဲ့နေ့… အပြင်ကနေ ခြောက်နာရီမထိုးခင် ပြန်ဝင်လာရတော့ ကျနော်အဖိုးက ကျနော့်ကို တစ်ခုမေးတာကို ပြန်သတိရတယ်… ဒီက ဘင်္ဂလီအမျိုးကုလားတွေကို ငါတို့က တစ်ခုခုလုပ်ကြတယ်ထားလိုက် ဟိုမှာရှိတဲ့ ငါတို့အမျိုး ရခိုင်တွေကို ဘင်္ဂလီတွေက ဒီလုိုပဲ ပြန်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကော တဲ့… စဉ်းစားစရာတော့ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်…
(ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေဟာ ဘယ်နေရာပဲရောက်နေနေ သူတို့လို အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်မရှိကြဘူးဆိုတာပါပဲ…) 10 hours ago · 13
Nyi Chay ဆိုင်လားမဆိုင်လား မသိဘူး… ပြောမိပြီ..
(တိုက်ဆိုင်၍ သတိရသွားခြင်းသာ)… 🙂 10 hours ago · 4
Astro Naut ၂၀၁၁ က ကုလားနဲ့ဖြစ်တေ တိုက်ပွဲကိုက GTC ကျောင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ရှေ့ ဆုံးက ပါဝင်ခလို့ဇာလောက်ထိပြင်း ထန်ရေ ဆိုစော်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခ ရရေ ,,, အပြုတ် မရှင်းခရစော်ကို ရာ ရင်နာရေ တစ်ခါတစ်ခါ ,,,,, စာအရေး အသားတိ ကောင်းကောင်းဘာရေ ညီမချေ ရတာနာ 🙂 10 hours ago · 6
Hla Htwe i really appreciate in ur post let me share!!!!! 10 hours ago · 1
Min Thu Very nice , this is the best 10 hours ago via mobile · 2
Venganda Sara ဘာသာရေး ဆိုတာ နိုင်ငံ လူမျိုး ယဉ်ကျေးမှု အတွက် အရေးကြီးဆုံးပဲ။ ဘာသာဝင်တိုင်းဟာ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာ ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်။အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုး ! ကမ္ဘာက မြန်မာဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လို့သိကြတယ် ခုတော့ ကပြားတွေများနေတယ် မြန်မာလူမျိုး ဘာသာ ……. လို့ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ မနည်းပါလား။ တကယ်တော့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကိုချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရင် ဒီလို ကပြားတွေ တို့နိုင်ငံမှာ များမလာနိုင်ဘူး ။ ကပြားတောင် အသုံးမကျခဲ့ရင် လူမျိုးခြား ဘာသာခြား တွေ ဆိုရင် ပြောစရာ မရှိ ။ ဒီလူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေငေ့် တို့နိုင်ငံ တို့လုမျိုး တို့သာသနာ ဆုတ်ယုတ် ယိုယွင်းနေတာ သတိချပ်ဖို့ အချိန်ရောက်နေပြီ။ခုခေတ်မြို့ကြီးများတွင်ရှိသောသူဌေး အများစုသည် ကုလားတရုတ် အဲဒိတော့ အလုပ်သမား အများစု သည် မြန်မာ ဗျာ ကောင်းကြသေးလား တော်ပါပြီးဗျာ ဆက်ပြောရင် ရေးလို့လဲ ကုန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး အဓိက ကတော့ ကိုယ်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာ ချစ်မြတ်နိုးတက်သော မြန်မာပီပီ မြန်မာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုချင်ပါတယ်။အထူသဖြင့် လူုငယ်တွေပေါ့။ 10 hours ago · 3
Okkar Kyaw nice! 10 hours ago · 2
Shwe Aung The best….! 10 hours ago via mobile · 2
Daniel Agger ကျနော် ချင်းတစ်ယောက် ခရစ်ယာန် တစ်ယောက်ပါညီမ…ဒါပေမယ့်..ဒီစာကို ဖတ်ရင်း မျက်ရည်လည်မိတယ် ဆိုတာကို ရှိသမျှ ဘုရားတွေကို တိုင်တည်ပြီး ပြောရဲပါတယ်…ဒီပို့ စ်ကို သာမန်ထက်ပိုတဲ့ ဂုဏ်ယူတဲ့ စိတ်နဲ့ရှဲသွားပါတယ်…..ရခိုင်ပြည်ကြီး ရိုဟင်ဂျာရန်ကနေ အမြန်ဆုံလွတ်ကင်းပါစေလို့ရင်ထဲကနေ လေးလေးနက်နက်ကို ဆုတောင်းပေးပါတယ်……9hours ago · 24
Aung Shwe Oo ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ရင်ထဲကလာတဲ့ စကားတွေဖြစ်လို့ ဖတ်ရတဲ့သူတွေရဲ့  ရင်ထဲကို ဒိုင်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ ရိုက်ခတ်စေပါတယ်။ အပိုအလို လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေမပါဘဲ၊ ပကတိအခြေအနေနဲ့ ရခိုင်ဒေသခံတွေရဲ့  ခါးစည်းခံနေရတဲ့ ဒုတ်ခကို ယထာဘူကျကျ သုံးသပ်ထားတာမို့ အလွန်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်… သင်းချို။9hours ago · 9
Oceano Syrena Angela ဖတ်ပြီးမျက်ရည်ကျရပါတယ်….ဒီထက်ပိုပြီးပြောစရာမရှိတော့လို့ပါ9hours ago · 4
Khaing Su sis! ရင်ထဲမှာ ဟိနေရေ မေးခွန်းတိ ပြောချင်စော်တိကို အခုပိုင်မျိုး ဖတ်ရရေ အတွက် ရင်ထဲမှာ ခံစားရပါရေ — အဇော်ပိုင်ပြောရဖို့ဆိုစော်ကို မပြောပြတတ်လို့ မပြောခရစော်ပါ ညီမချေ ရေးထားစော် တိ က အစ်မ ရင်ထဲမှာ ပြောနီရေ စကားတိမို့ ပိုပြီးကေ ခံစားရရေ—- လေးစားပါရေ ညီမချေ9hours ago · 5
Zaw Myo good9hours ago · 1
Nyi Kyaw လူတော်တော်များများသိသင့်ပါတယ်။ ဒါတောင် ၂၀၀၁ နောက်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။ အာဏာရူးတွေ ကိုယ်ကျိုးရှာ အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတွေကြောင့် ဒီကောင်တွေလွယ်လွယ်ဝင်လို့ရလာတာ။9hours ago · 2
Chit Pu အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခုက ရခိုင်ဒေသကို ဥပဒေ အမှောင်ချထားလို့ မရတော့တာဘူးဆိုတာပါပဲ … …… ရေးထားလို့ ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ..နောက်လည်းဒီလို မျက်မြင်အခြေအနေလေးတွေ ဖတ်ချင်ပါရေ…9hours ago · 2
David Davidroyale ဖြစ်ရပ်မှန်တိဖြစ်တေတွက် ဂုပိုင်ရေးပြီးတင်ပြရေ မမကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရေ….let me share…9hours ago
Phyo Ei Khine Sis. I don’t know what should I comment. But it makes me feel. 🙂9hours ago · 3
Aung Shwe Oo အတတ်နိုင်ဆုံး ရှယ်ပေးကြပါဗျို့။ ဒေသတစ်ခု ရဲ့  အခြေအနေအဖြစ်အပျက်ဇစ်မြစ်ကို အတွင်းကျကျ ဂကနဏ မသိလည်းမသိ၊ လေ့လည်းမလေ့လာဘဲနဲ့၊ ဟိုလိုမျိုးဖြစ်သင့် ပါတယ်၊ ဒီလိုမျိုးဖြစ်သင့်ပါတယ်ဆိုပြီး ဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးလေသံနဲ့ ဖေ့ဘုတ်ထက်မှာ စွာကျယ် စွာကျယ်ရျွှေပြည်အေးတရား ဟောနေကြတဲ့ ကိုကို မမတို့ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြီးရင် ကိုယ်ချင်းစာတရားလေးတွေ၊ နားလည်စာနာမှုတွေ ဖြစ်လာတန်ကောင်းပါရဲ့ ။9hours ago · 10
Oung Kyawmin ကျွန်တော် ရခိုင်အမျုိုးသားတစ်ယောက်အနီနဲ့ ဂုဏ်ယူပါရေ9hours ago · 2
Hnin Pwint Cho ဒီစာကိုဖတ်ရင်း အရမ်းကိုယူကြုံးမရ ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ငိုကြွေးခဲ့မိပါ ဒီစာကြိုမန်မာနိုင့်ငံသားတိုင်း ဖတ်ကြည့်နိုင်ကြပါစေ မရတနာကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်လို့ ၊9hours ago via mobile · 6
Cho Oo ညီမချေ စာကို ဖတ်ပြီး ယင်းနိရက်တိက ကိုယ်တိုင်ခံစားချက်တိကို အသစ်ပြန်ခံစားရလို့ ထိန်းမရအောငိုမိရေ….ပြောပြတတ်တေသူနန့် မပြောပြတတ်တေသူအားလုံး အတူတူခံစားရကတ်စွာပါရာ… ဒေပိုင်ရီသားတင်ပြပီးလို့ ကကောင်းကျေးဇူးတင်ပါေ၇… shareလိုက်ပါဗျန်…..9hours ago · 6
Oung Kyawmin ရခိုင်သား၊ ရခိုင်သမချေတီ facebook မှာ တစ်နေရာစုကပ်ပါမေ. စီးလုံးခြင်းဟာ ကျွန်တော်ရို့အတွက်အင်အားပါ. အားလုံး ရခိုင်စကားပြောပြီး add ကပ်ပါ. 8 hours ago · 5
Yin Tun အခုဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စမှာ လူသိများသွားတာက တောင်ကုတ်ကိစ္စကြောင့် … ဂျာနယ်တွေ ဥပဒေတွေ ဝင်လာတာ တောင်ကုတ်ကြောင့် … တောင်ကုတ်က ဖြစ်ရပ်ဟာ တကယ့်ကို အမှားကြီးကြီး ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ … သေဆုံးသွားတဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်း ဝမ်းနည်းမိပါတယ် … အားလည်း …See More 8 hours ago · 6
Myo Tun Myint Thanks for the post, please let me share. 8 hours ago · 3
Phyow Nya မနေ့ က ရုပ်ရုပ် ဖြစ် တယ် ဆိုလို့ အိမ် ကိုဖုန်းဆက် လိုက် တော့ သူတို့ထိပ်လန့်နေကြလေရဲ့….. အိမ်ရှေ့ နားလေး မှာ ဓါးတွေ ကိုင်ပြီး လူစုနေကြတာကိုး.. 8 hours ago · 3
Min Thu ပြောချင်လွန်းလို့ , ပြည်မှာလဲ ကုလားဗမာ ခနခန ဖြစ်တာပဲ , အကုန်လုံးတော့မသိဘူး နောက်ဆုံးဖြစ်တာတော့ မူဆလင်ကောင်လေးက ဗမာကောင်မလေးကို ခိုးပြေးပြီျးမှ သူတို့ဘာသာထဲ အတင်းဝင်ခိုင်း မရတော့ နှိပ်စက် , မင်္ခနိုင်လို့သူ့ ဦးလေး ဘုန်းကြီးကို သွားပြောေ…See More
Naing Thein အကာအကွယ်မရှိတဲ့ကျွန်မတိုတွေအတွက်သူတိုတွေကာကွယ်ဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေပါလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ချစ်မိတယ် ယူကြုံးမရဖြစ်မိတယ် 8 hours ago · 3
Naing Thein လေးစားပါရေ အစ်မ 8 hours ago · 2
Myo Tun Myint Burma isasecular state, no one has right to force anyone to convert into any religion. If anyone committed that action he/she is violated the State Policy on Religion…(Secularism)…….. 8 hours ago · 2
Ra Khine ငါ့တပည့် စာကို ဖတ်ရစော်.. ဆရာတောင်မျက်ရည် ကျမိရေ………ကျေးဇူးပါ ဆရာမသင်းချို…ကျွန်တော်ရို့ ခံစားချက်တိကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးတတ်စော် ဆရာမ အတွက် ဂူဏ်ယူပါရေ.. 8 hours ago · 4
Min Thu Myo Tun Myint Please refer to the speech that DASSK had made in thailand , even u have the best law in the world and if u cant apply it , its useless , kind of the meaning 8 hours ago · 3
Kyaw Sanhlaing ဝမ်းနည်းမိပါတယ်…. 8 hours ago · 2
Zaw Nyein share ခပါရေမကြီး။ 8 hours ago · 2
Wai Soe လေးစားပါတယ် 8 hours ago · 2
Μψφζ Τηιτ တရာတစ်ဖက်.ဓါးတစ်ဖက်..အနောက်ဘက်ကကုလားရန်ကိုတာဆိးခံနေရတာ.ရခိုင်တွေသာအသိဆုံးပါ..မိုက်တယ်လိုထင်ချင်ရင်လည်းထင်နိင်ပါတယ်..မိုက်ခဲ့မိတယ်ဆိုရင်တောင်နလုံးလှလူမိုက်ပါ…အမှန်တရားတစ်ခုအတွက်မိုက်ခဲ့တာပါ..မမိုက်ခဲ့ရင်သောကြာနေ့တိုင်းမဟူတ်တာတွေလုပ်နေရမယ်အားလုံး… 8 hours ago · 3
ပိုင် မူး ငယ် ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်သာသနာအတွက်ကိုယ့်ပခုံးထက်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူထားပါတယ်။အဲဒီလိုပြောလို့ လဲလူသတ်ခိုင်းတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ဗျာ။ တရားဥပဒေအတိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတွေကပဲကိုယ့်စည်းရိုးကိုခိုင်ခိုင်မာမာ ကာနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းပေးကြပါ။ဘင်္ဂလားနှင့်ငါ့တိုင်းရင်းသားယှဉ်လာရင်လက်သည်းဆိတ်တော့လက်ထိပ်နာတက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားများအေးဆေးစွာနဲ့ ဘင်္ဂလားပြည်သို့ ပြန်ကြဖို့ ကိုပဲတောင်းဆိုပါတယ်။ 8 hours ago · 5
Tay Zar let me share sis: congratulation for this post : 8 hours ago · 2
Khine May Latt ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်တောင်ကျတယ် ညီမ။အမ ဆို ဘူးသီးတောင် က ဆိုတော့ အဖြစ်ပျက်ချင်းမတူပေမယ့် ခံစားချက်က ထပ်တူပါပဲ။ pls let me shear par… 8 hours ago via mobile · 3
Aungaung Aung စားရေးသူကို လေးစားပါတယ် 8 hours ago · 4
Aungaung Aung ဂုမ်ယူပါတယ် 8 hours ago · 2
Aungaung Aung ဂုဏ်ယူပါတယ် 8 hours ago · 2
Aungaung Aung ပြန်ကူပြီတခြားနေရာမှာတင်ပါရစေ ခွင်ပြုပါအုံ 8 hours ago · 2
Arakanese Lu Nge ဖြစ်နိုင်ကေ အခါ တစ်ရာမက like လုပ်ပစ်လိုက်ချင်ပါရေ….
အင်္ဂလိပ်စာနန့် ရွီးနိုင်ကေ ပိုကောင်းပါဖို့…..8 hours ago · 6
Rakha Thandar Very Good Sis, All of true.We have to talk more.Pls Share for all. 8 hours ago · 3
Myat Thein Tun သူတို့လို လူတကာကြားအောင် ပတ်ငိုပြခဲ့မယ်ဆိုရင် ငါတို့မျက်ရည်နဲ့ ရခိုင်ပြည်မှာ နောက်ထပ်မြစ်တစ်စင်း စီးဆင်းသွားလိမ့်မယ် 8 hours ago · 15
Sitt Ko Khine ကုလားမာယာ သဲ10 ဖြာ …….7hours ago · 2
Marm TweeZan BRAVO! good writer. A hit Note …7hours ago · 1
Arakanese Lu Nge မှန်ပါရေ ကိုမြတ်သိန်းထွန်း….7hours ago · 3
Tharkyaw Wai ဂကောင်းကျေးဇူးတင်ပါယေ အိုက်မ အဂုပိုင် မသိသိန်းတဲ့ အကြောင်းတိသိရပါယေ ခံစားချက်ချင်း ထပ်တူကျပါယေ။တောင်ကုတ်မြို့သူ/သားများကိုယ်စား အကျွန်မှ ကျေးဇူးအထူးတင်လိုက်ပါယေ အိုက်မ။။7hours ago via mobile · 4
Kyaw Win Naing ကျနော်ချေခါ ဘာမနားယေဖြစ်စွာ ကျနော်ရို့မိသားဇူ ဖိုးဖိုးရို့အိမ်မှာလာနီခီရဘာရေဒေ ကျနော် အသက်ကယင်းခါ ၁၁နှစ်ပါ7hours ago · 1
Nyi Htoo ၂၀၀၁ အဓိကရုံး ကို ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးလိုက်တဲ့လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ဖတ်ရင်းက စိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်မိပါတယ်…..ကျွန်တော်က အဲဒီတုန်းက ၁၃ နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်……ကျွန်တော့အကိုဆိုအဲဒီညက ဓါးကိုင်ပြီးထွက်သွားတာမနက် ၄ နာရီလောက်မှပြန်ရောက်ပါတယ်….. အခုလိုအသေးစိတ်ပြန်ရေးပေးတဲ့ ကျွန်တော့် မကြီး Ze Roကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်……..7hours ago · 4
လူ စိုး ကြီး ထိတယ်ဗျာ7hours ago
Chan Tun ဒီကုလားတွေကြောင်းငါတို့ အဘိုးအဘွားတွေ၁၉၄၂ခုနှစ်ကမျက်ရည်ချောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီဒီခေတ်မှာလည်းမျက်ရည်တွေနဲ့ဖြစ်သန်းခဲ့ရပြီနောင်အတွက်လည်းတွေးပြီးတောရင်လည်းပြီးအစ်မပျော်ပါလား………7hours ago · 1
Myo Tun Myint ‎’Refugees International says 500,000 Myanmar people have been displaced by conflict in eastern Myanmar and another 800,000 Muslims, known as the Rohingya, in western Myanmar are stateless.’ Bangkok Post (5/5/20012) by Achara Ashayagachat…7hours ago
Myo Tun Myint what does it means ????? 800,000 Muslims, Known as Rohingya…..in western Myanmar are stateless…..(just information to all par byar)7hours ago
Myo Tun Myint do we have 800,000 Rohingyas in Burma (Myanmar)????? where do they come from?7hours ago
Myo Tun Myint sorry Bangkok Post (5/6/20012)7hours ago
လူ စိုး ကြီး တစ်ယောက်ထဲရှုပ်နေတာဘဲ7hours ago · 1
Kee Kee Ye Fairly executed and perceived. We all need to agree here that racism and violence would not accomplish for our intention to protect and legitimately being treated. This kind of impartial, non abuse posts and comments could limelight the justice. Pls stop posting violence photos and comments that would rather absurd to the people and make the situations hysterical and distraught.7hours ago · 2
Zaw Tun အများကြီးထောက်ခံပါရေ ငိုချင်စိတ်တိကိုထိန်းပြီးကေဖတ်လိုက်ရပါရယ်…ကူးလားပါယင့်…7hours ago · 4
Than Paw ကုလားအရေးက်ုမြန်မာနိင်ငံသားအားလုံးဝိုင်းဝန်းစဉ်စားသင့်ပြီ။ကုလားအရေးကိုရခိုင်တွေကဘဲဒိုင်ခံလုပ်နေရတယ်။အကျင့်ဆိုးလ၀က၀န်းထမ်းတွေကြောင့်မတရားရောက်လာကြတယ်။ကုလားတွေဆိုင်မှာဘယ်မြန်မာမှဈေးမ၀ယ်ကြနင့်။အေဒီကရတဲ့ပိုက်ဆံနင့်ကုလားတွေကမြန်မာမတွေယူဗလီဆောက်နေကြတာ။ကြာရင်အင်ဒိုနီးရှားလိုဖြစ်သွားမယ်။အားလုံးလူမျိူးသတိရှိကြပါစေ။6hours ago · 6
Ze Ro အားလုံးသူကို ပြောချင်ပါတယ် … ဒီစာက ရခိုင်၊ ကုလား အဓိကရုဏ်းဖြစ်စေဖို့ ရေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါ … ဒီစာထဲမှာ ရခိုင်က ကုလားတွေကို မုန်းအောင်ပြောနေ ရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတာမျိုး မဟုတ်ပါ … ရခိုင်ပြည်မှာ လုံခြုံမှုမဲ့လို့ လူတွေရဲ့ ခံစားရခြင်းများ … သံသယများ ကြောင့် ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ အကြောင်းအကျိုးများကို ပြောပြချင်ရုံသာ … အားလုံး နားလည်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် … လေးစားစွာဖြင့် …. သင်းချို6hours ago · 8
Ra Khine ဒါက စစ်တွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တစိတ်တဒေသာဘဲရှိသေးတယ်… ဘူးသီးတောင် မောင်တောမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ သာရေးရင် ရေးလို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး………ရခိုင်တွေ ခံစားနေရတဲ့ သောကတွေကို မျှဝေခံစားကြည့်ကြပါ ဗျာ…….ကုလားဆိုးရန်ကို ၀ိုင်းဝန်း ကာကွယ်ကြပါ…….ဘသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်လှုံဆော်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး……..ဒီလိုမှ ၀ိုင်းဝန်းမကာကွယ်ရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး……..ကုလားပြည်ဖြစ်သွားနိုင်တာ လူတိုင်း နားလည်နိုင်မှာပါ….6hours ago · 10
လူ စိုး ကြီး မှန်ပါတယ်ဗျာ6hours ago
Linn Nay Min ‎( မှတ်ချက်။ ။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တိုင်းကို စော်ကားခြင်းမဟုတ်ပါ … ရခိုင်ပြည်ရဲ့ အမှောင်ချခံထားရတဲ့ အခြေနေကို လှစ်ဟပြရုံသက်သက်သာ … တခြားသောသူတွေ ဒီကိစ္စကို ပြီးစေ ငြိမ်းစေချင်တာထက် ရခိုင်တွေက ပိုတယ်ဆိုတာကို သိထားစေချင်ပါတယ် … ရခိုင်ဒေသမှာ အ…See More
Rain Drops Touch my heart ! I experienced this terrible feeling since 2001 . At that day , our family & relatives lost all houses & properties in the fire that was burnt by Muslim Kalar . I can’t effort to write down about this true event bcoz this case make me so SAD Till now . Thanks so much for this post .5hours ago via mobile · 2
Zawtun Lin ကိုယ့်ဝမ်းနာစွာကို ကိုယ်ရာသိပါရေ..လိပ်ပူစွာ လိပ်သိရေ..အစိုးရမရှိဂေလေ့..အနိန်သာကြီးပါယာယေ..ရခိုင်ထက် ကလားကို ချစ်ရေ..ဗမာ အစိုးရ အားလုံးကို သိပါရေ..စာရွီးသူ မ,ချေ ကိုလေးစားပါယင့်..ငါကတော့ခါ နင်ပြောရေ နင်အကိုတိထဲက တယောက်ပိုင်ယာယေ..ကျေးဇူးတင်ရေ မချေ..5hours ago · 2
Myatt Myintzu ဟုတ်ပါတယ် နယ်ဖက် အများစုမှာ တရားဥပဒေ သိပ်မရှိသလောက်ပဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်စောင့်ရှောက်နေရတယ် ငွေများတရားနိုင်ဖြစ်သလို၊ရာထူး အရှိန်အ၀ါနဲ့လည်း နိုင်စားကြပါတယ်။4hours ago · 1
Lu Zaw Sis You Are The One Who Make Other To Under On Our People Feeling And What Are We Facing Before In Present . May All Other People Will Understand For This.3hours ago · 3
Khine Lin Shwe ပရိယာယ်မရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ အစ်ကိုတွေက ကျွန်မတို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ သူတို့တွေ ရှိကြောင်းကို ပြလိုက်သလိုပဲ … " ကျွန်မတို့ သွားနေကြတဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ရပ်စေတဲ့ အတွက်ရော … လူ့အသက်ကို သတ်လိုက်တဲ့ အတွက်ရော မုန်းတယ် … ပြီးရင် သူတို့တွေ ကိုယ့်…See More
Aye Maung မတရားတာကို လက်ပစ်မကြည့်တတ်တာရခိုင်ရဲ ဗီဇပါ…. ဥပမာ တစ်ခုပြောပြမေ.. ကုလားတစ်ယောက် ကျွန်တော်တို့ ရွှာထဲ ငါးလာရောင်းတယ်… အဲဒါ အရက်မှုးနေတဲ့ ရခိုင်ငမှုးတစ်ယောက်က ရိုက်တယ်… တစ်ချက်တောင် ကောင်းကောင်း မရိုက်ရဘူး ရခိုင်တွေ တရားလုံးထွက်ပြီးတားတာဘဲ…See More
← Food for thoughts	ဘင်္ဂလီများ၏ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်မှုများ →